China Polycrystalline Solar Panels, Polycrystalline Solar PV Panels, Polycrystalline Anyanwụ Photovoltaic Panel Manufacturer na Supplier
Nkọwa:Polycrystalline Solar Panels,Polycrystalline Solar PV Panels,Polycrystalline Solar Photovoltaic Panel,Polycrystalline Photovoltaic Solar Panels,,
Polycrystalline Solar Panels,Polycrystalline Solar PV Panels,Polycrystalline Solar Photovoltaic Panel,Polycrystalline Photovoltaic Solar Panels,,
Home > Ngwaahịa > Ngwa igwe na panel > Polycrystalline Solar Panels
Ngwaahịa nke Polycrystalline Solar Panels , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Polycrystalline Solar Panels , Polycrystalline Solar PV Panels suppliers / factory, wholesale high-quality products of Polycrystalline Solar Photovoltaic Panel R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
China Polycrystalline Solar Panels Ngwa
Polycrystalline anyanwụ panels bụ nke mkpụrụ ndụ mkpụrụ ndụ silicon silicon polycrystalline, VA film obere ala agbagwoju, ìhè electroplating ọnụego ọlaedo. Polycrystalline silicon bụ nchịkọta nke nwere ọtụtụ ọnụ ọgụgụ nke otu kristal kristal. Dịka, pancellalline anyanwụ panels nwere arụmọrụ nke ihe dị ka pasent 18. Ike mmepụta nke polycrystalline oghere ndị dị na mbara igwe na -edozi anya na - / 3% iji hụ na ekwesịrị ikwe ka akpa ọ bụla. A na-anwale akụkụ ya site na nkà mmụta sayensị a ma ama n'ụwa niile iji hụ na nhapụta nke mmepụta ọnụ ọnụego. N'ime usoro mmepụta ihe, nkà na ụzụ dị elu na-enweghị ihe nkedo wuru na-ejikọta na akara siri ike, nke nwere ike dị elu ma dị elu, na ngwongwo ngwongwo a na-akwagharị ma kwụchie igbe igbe mmiri adịghị ekpuchi iji hụ na nchekwa nke components. Ike mmepụta nke pv modul a ga-abụ ihe karịrị 90% n'oge iri afọ eji. N'ime afọ iri ise na ise, ikike mmepụta karịrị 80%. Ụdị nkwakọ ngwaahịa na ngwa ndị dị ka igbe nkwụnye nke ahọrọ site na panelstalline oghere nke anyanwụ na-agbaso ihe ndị a chọrọ iji ihe ubi na ọkwa nchedo rute IP65. Ngwurugwu ahụ nwere ike iguzogide ọsọ ọsọ nke 120Km / h, ike ya nwere ike iguzogide ifufe ifufe, akụ mmiri ígwé na snow.